စိတ်ဝင်စားဖွယ်မြေအောက်ရထားဘူတာရုံများနှင့်မြေအောက်အနုပညာ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > စိတ်ဝင်စားဖွယ်မြေအောက်ရထားဘူတာရုံများနှင့်မြေအောက်အနုပညာ
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 30/10/2019)
မြေအောက်ရထားဘူတာများတွင်မြေအောက်အနုပညာသစ်ကိုဖြစ်ဟန် ပြတိုက် လူများ. သူတို့ကသစ်ကိုမဖြစ်မနေ-မြင်ဖြစ်လာကြပြီ ခရီးစဉ် အနုပညာနှင့်ဒီဇိုင်းနိူးများအတွက်. သူကားအဘယ်သူထင်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်? အများဆုံးဖှယျအများပြည်သူနေရာများ၏အချို့, အကြီးစားအနုပညာနှင့်ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းအများအပြားမြို့ကြီးများ '' မက်ထရိုဘူတာတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်. ထို့အပြင်, မြေအောက်အနုပညာမြေအောက်ရထားမှအရောင်တစ်မျိုးစုံထက်ပိုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
မြေအောက်ရထားဘူတာရုံများစီးနင်းသူခရီးသည်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်တိုးကိုမြင်လျှင်နေကြတယ်. ထိုကွောငျ့, ရလဒ်အနေဖြင့်, သူတို့အသိုင်းအဝုိင်း၏အသိတစ်ခုတိုးကိုမြင်လျှင်နေကြတယ်.
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အနုပညာလည်းများစွာသောအခြားနည်းလမ်းတွေထဲမှာလျော့ကျစေနိုင်သည်, ကဲ့သို့: ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု, အနုပညာလက်ရာများဖျက်ဆီးခြင်း, နှင့်ခရီးသည်ပျင်း! အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်အဆုံးမဲ့ဖြစ်ဟန်! ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးခြယ်မျှဝေဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေအဘယ်ကြောင့်ဘယ်ဖြစ်ပါသည် မြေအောက်အနုပညာ – စိတ်ဝင်စားဖွယ်မြေအောက်ရထားဘူတာ.
အရည်အသွေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘဝပုံစံ၏ = အရည်အသွေး
တစ်ဦး၏အဆိုအရ ပြင်သစ်ရဲ့မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးအင်စတီကျုအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်လေ့လာမှု. Parisian ပျမ်းမျှကုန် 23 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ရက်ပေါင်းတစ်နှစ်. ဤရွေ့ကား, တစ်ခုချွင်းချက်မဟုတ်ပါဘူး. လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှအသုံးပြုမှုကိုကျော်ပြည်သူ့ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အလုပ်အခက်အခဲမှ.
မင်းသိလား: လေ့လာမှုများအရသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရည်အသွေးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသုံးပြုသူများ၏ဘဝ၏အရည်အသွေးကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုပြသခဲ့သည်? အဆိုပါ ခရီးသွားများ၏အတွေ့အကြုံကို အကူးအပြောင်းများကသူ့ဟာသူအတွက်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သင့်. "ပြည်သူ့အနုပညာတစ် space ၏ဝိသေသလက္ခဏာအထဲကဆွဲနိုင်ပါတယ်, တစ်ရပ်ကွက်နှင့်၎င်း၏နေထိုင်သူများ၏သမိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအရေးပါမှု၏နားလည်မှုကူညီ။ "
မြေအောက်အနုပညာစီမံကိန်းများကိုလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်. ပန်းပုကနေ, Mosaic, ပန်းချီကား. တပ်ဆင်တူသောပိုကြီးလုပ်ငန်းများရန်, အက္ခရာ တင်., နှင့်သက်သာ. ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Picks တချို့ရှိနေပါတယ်.
မြေအောက်အနုပညာ – စိတ်ဝင်စားဖွယ်မြေအောက်ရထားဘူတာ: စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင်
ဒါဟာဆွီဒင်မြေအောက်အနုပညာလေ့လာစူးစမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းတွင်ပထမဦးဆုံးခဲ့ကြောင်းသင်တို့တွင်အချို့သောတစ်ဦးအံ့အားသင့်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. သငျသညျဆှီဒငျမြို့တော်အောက်ကိုကြည့်ပါလျှင်, သငျသညျမြေအောက်ရထားလိုင်းများတစ်ခုအနုစိတ်ကို web တှေ့လိမျ့မညျ.
ထက်ပိုပြီးရှိပါတယ် 90 ၏ 100 ဘူတာ အဆိုပါ 110km အတွက် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစနစ်က. သူတို့ကတခါတရံတွင်ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးအနုပညာ "အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည် ပြခန်း". သူတို့ကပန်းချီကားများနှင့်အတူအလှဆင်ခဲ့ကြ, တပ်ဆင်, Mosaic, နှင့်ပန်းပုအားဖြင့် 150 1950 ကတည်းကအနုပညာရှင်တွေ.
ဤအအံ့သြဖွယ်မြေအောက်အနုပညာကိုအပိုင်းပိုင်းလေ့လာစူးစမ်းမှုတျသှငျး feeling? တစ်ဦးကရထား Save သငျသညျရှိရနိုင်! အဘယ်သူမျှမက hidden အခကြေးငွေနှင့်အတူမိနစ်ရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/underground-art-subway-stations/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#byရာဝတီ #အနုပညာ #SubwayArt #မြေအောက်အနုပညာ အတတ်ပညာ ပြတိုက် မြေအောက်ရထား